တရုတ်စက်ရုံစျေးနှုန်းအနိမ့်ဗို့အားကြိုးဖြန့်ဖြူးသေတ္တာ Supplier-shengte ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Shengte
စက်ရုံစျေးနိမ့်ဗို့အားကြိုးဖြန့်ဖြူးရေး Box Supplier-shengte
ဤဗို့အားနိမ့်ကေဘယ်ဖြန့်ဖြူးသူများသည်အဆင့်ကြိမ်နှုန်း ၅၀/၆၀HZ၊ အဆင့်ဗို့အား ၃၈၀V (၆၆၀V) ပါဝါစနစ်ကိုပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပါဝါနှင့်အလင်းဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများအဖြစ်ထိန်းချုပ်သည်။
၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များ၊ Transformer များနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးဘူတာများ၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မြို့ပြလမ်းများ၊ ဥယျာဉ်လူနေအိမ်ရာများ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၊ လေဆိပ်များစသည်ဖြင့်သင့်တော်သည်။
၎င်းသည်ရေနံနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကဲ့သို့အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့များပါ ၀ င်သောစက်ရုံများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့်ကျွန်းများကဲ့သို့ဆားငန်မှိုင်းသောနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အထူးသင့်တော်သည်။
A. box အစိတ်အပိုင်းကိုအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ပြောင်းပြန်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အပြည့်အ ၀ insulated polymer ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း (SCM) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သေတ္တာတစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီရဲ့လက်စွပ်နဲ့စုထားပြီးမြင့်မားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုရှိတယ်။ ၎င်း၏တည်ဆောက်ပုံသည်ဆန်းသစ်၊ ကျစ်လစ်။ စုစည်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတွင်မိုးရေကာဒီဇိုင်းနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ဒီဇိုင်း၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
B. အစိုးရအဖွဲ့တွင်အလွန်အစွမ်းထက်သောလျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ insulating index, dielectric strength, leakage resistance marking index နှင့် aging resistance index တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အလွန်စိုစွတ်ပြီးကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည်ရှားပါးသည်။
C. ၎င်းသည်အလွန်အားကောင်းသောစက်မှုစွမ်းပကားရှိသည်။ သတ္ထုသေတ္တာ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသောလုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အတူ၊ သေတ္တာအတွင်းမှလိုင်းကျိုးကျခြင်း (သို့) ပြင်ပအင်အားသက်ရောက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားလျှင်၎င်းကိုအကာအကွယ်မဖြစ်စေဘဲအထူးသဖြင့်လူ ဦး ရေထူထပ်သောနေရာများအတွက်အကာအကွယ်ကွန်မင့်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
E. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ insulator တွင်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်။ ကက်ဘိနက်ကိုယ်ထည်သည်မြေသားစနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အထူးလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းထည့်သွင်းမှုမပါဘဲအပြည့်အ ၀ ကာကွယ်ထားသည်၊ ၎င်းသည်ကက်ဘိနက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်နှင်းခဲဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
အက်ဖ်။ အလွန်အစွမ်းထက်သောဓာတု corrosion ခံနိုင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားနည်းသောအက်ဆစ်၊ အားနည်းသောအယ်ကာလီ၊ ဆားဖြန်းခြင်း၊ မိုးချေးများကိုထိထိရောက်ရောက်တွန်းလှန်နိုင်သည်။
G. အလွန်အိုမင်းခံနိုင်ရည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုပစ္စည်းများကိုပစ္စည်းထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြင့်သေတ္တာကိုပိုမိုတာရှည်ခံစေပြီး ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှည်စေသည်။
H. ထူးခြားသောမိုးကာဒီဇိုင်း၊ အပြည့်အ ၀ ဖုံးအုပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ IP44 (သို့) IP54 အထိကာကွယ်မှု
I. ကြွယ်ဝသောအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများသည်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရိုးရှင်းသော၊ အဆင်ပြေ၊ ပေါ့ပါးသော၊ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံနိုင်မှုနှင့်မီးလျှံနှေးကွေးမှု၊ အလုံးစုံတည်ဆောက်ပုံသည်တည်ငြိမ်၊ လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
ဂျေကျစ်ကျစ်လစ်လစ်တည်ဆောက်ပုံ၊ လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်သဘာဝအရောင်၊ လိုက်ဖက်ညီလှပသော၊ အလင်းရောင်မညစ်ညမ်းပါ။
အမှတ်စဉ်နံပါတ် နာမည် ကုမ္ပဏီ စံတန်ဖိုး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အညွှန်းကိန်းများ စမ်းသပ်စံ
1 သိပ်သည်းဆ g/cm2 ၁.၇၅ ～ ၁.၉၅ ၁.၈၄ GB1033
2 ရေစုပ်ယူမှု မီလီဂရမ် ပေါင် ၂၀ ၁၈.၃ GB1034
3 အပူမျက်နှာပြင်အပူချိန် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ပေါင် ၂၄၀ 240 GB1035
4 Charpy သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိ KJ/m2 ပေါင် ၉၀ 124 GB1043
5 ကွေးခိုင်မှု Mpa ပေါင် ၁၇၀ 210 GB1042
6 လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် (ပုံမှန်) Ω ≥ ၁.၀ × ၁၀၃၃ ၃.၀ × ၁၀၁၃ GB1410
7 လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် (နှစ်မြှုပ်ခြင်း ၂၄ နာရီ) Ω ပေါင် ၁.၀ × ၁၀၁၂ ၅.၃ × ၁၀၁၂ GB1410
8 ပါဝါကြိမ်နှုန်း Dielectric Strength MV/မီတာ ပေါင် ၁၂.၀ ၁၇.၁ JB7770
9 Dielectric ဆုံးရှုံးမှုအချက် (1MHz) - ≤ ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၃ GB1409
10 နှိုင်းရ dielectric ကိန်းသေ (1MHz) - ≤ ၄.၅ ၄.၂ GB1409
11 လျှပ်စစ်ခုခံ s ပေါင် ၁၈၀ 190 GB1411
12 Leakage Marking Index (PTI) v ပေါင် ၆၀၀ 600 GB4027
13 မီးလျှံနှေးကွေးမှု အတန်း FVO FVO JB7770
14 မီးခိုးအဆိပ်သင့်ခြင်း အတန်း Ⅱ Ⅱ JB7770
15 မီးခိုးသိပ်သည်းမှု အတန်း Ⅱ Ⅲ JB7770
အမှတ်စဉ်နံပါတ် စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
1 အဆင့်သတ်မှတ်သည် Hz ၅၀/၆၀
2 လည်ပတ်မှုဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်သည် V AC ၃၈၀/၆၆၀
3 လျှပ်ကာဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်သည် V AC ၆၉၀/၈၀၀
4 လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် A ပေါင် ၆၃၀
5 icw Ka ၅၀ (ls)
6 အထွတ်အထိပ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောလက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် Ka 100
7 ၁ မိနစ်ပါဝါကြိမ်နှုန်းဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် V 2500
8 ချိုးဖောက်နိုင်စွမ်း Ka 100
9 ကာကွယ်မှုအဆင့် - IP44 ဖြစ်သည်
10 လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့် - Ⅱ
ယခင်: dry type အမျိုးအစား Transformer
နောက်တစ်ခု: OEM စက်ရုံ 10KV Class S11 Series ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော Transformer အပြည့်အ ၀ တံဆိပ်ခတ်ထားသောပါဝါ Transformer-shengte